Palestina: Ny fiatrehana ny Ramadany any Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Septambra 2009 18:06 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, Español, Italiano, বাংলা, English
Manoratra i Lina Al Sharif, mpitoraka blaogy ao amin'ny 360 km2 of Chaos :
Ny Ramadany aty Gaza dia tsy mitovy amin'ny any an-kafa. Ny fiaretan'ireo mponina dia tena henjana izay ny sasany amin'izy ireo dia ny rano fotsiny no sotroiny amin'ny Iftar [amin'ny teny anglisy – sakafo hariva raisina ny hariva], satria mahantra loatra ka tsy afaka mividy sakafo izy ireo. Ny hafa indray dia mandray io sakafo io any anatin'ny tranolay ao an-toby natao ho an'ireo mpitsoa-ponenana rava trano noho ny ady.
Misy ihany, na izany aza, ireo zavatra izay mahafaly. Lina sy ny namany Bodour Abu-Kuwaik dia nanambatra miaraka ity seho momba ny Ramadany tany Gaza ity:
Ayman Quader mamangy ny namany noho ny iftar:
Voaasa hiara-mandray ny sakafo marainan'ny Ramadany any an-tranon'ny namako Jumaa aho androany. Mipetraka any Al Maghazi tobin'ireo mpitsoa-ponenana izy, izay misy ireo olona nizaka mafy ny fiatraikan'ny ady tamin'ny tranony sy ny lalambe. Tsotra be, maro amin'ireo mponina ao Gaza no efa mpitsoa-ponenana ary nandritra iny ady iny dia voatery nandao indray ny tranony sy ny fonenany. Nangataka tamin'ilay namako aho mba ho entiny mitsidika ireo lalan-kely mankany amin'ny toby, noho ny faniriako ny hifandray akaiky amin'ireo olona izay monina ao ankehitriny. Araka izany, tsapako hoe hatraiza ny tena fangirifirian'ireo mponina ao amin'io tobin'ireo mpitsoa-ponenana io. Ao afovoan'ny tobin'i Al Maghazi dia mbola misy trano lehibe iray rava – izay tsy afaka odian'ireo mponina ao amin'ny toby tsy ho hita. Nahita ankizy nilalao teo amin'ity trano rava ity aho ary dia nampalahelo ahy izany. Nefa IZY IREO toy ny tsy malahelo fa dia vao maika aza toa ravoravo.
Ny Paltoday News Network [amin'ny teny anglisy] dia namoaka lahatsoratra vao haingana mikasika ireo lehilahy tsy an'asa any Gaza ka manao asa an-tselika ohatran'ny musaheratis, izay mamoha ny olona vao mangiran-dratsy ho amin'ny sakafo, suhoor. Ao amin'ny blaoginy In Gaza, ny kanadianina Eva Bartlett manorata: